ရှေးမြန်မာ..: တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဆိုင်ရာ အနုပညာ
Posted by ရှေးမြန်မာ at 6/12/2009
Sai Nandar Aung December 18, 2011
Hello! Sa Ya, I think you can refer about our shan tribal facts from this link.
Sai Nandar Aung.
Phone Soule Dang August 09, 2012
လေးစားဦးညွတ် အားကိုးအပ်ရပါသော..စာပြုစုရေးသားသူခင်ဗျား.....အကြောင်းသင့်ပါက မွန်.၀ .ပလောင် အကြောင်းကို များများရေးပေးစေလိုပါတယ်...မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းမှာ ဒီရှေးကျတဲ့ လူမျိုးများကို ချန်လှပ်လို့ မရဘူးဆိုတာကို ..စာဖတ်သူလည်း သိလောက်ပြီးဖြစ်မှာပါ..
သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ကို ပါးစပ်ရာဇ၀င်မဟုတ်ဘဲ လိုသည့် အချက်အလက်များကိုလည်း တောင်းသူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား....။။။။
လူနီလေးတွေအကြောင်းလည်း လေ့ လာဘူးတယ်..ကချင် လူမျိုးအနွယ်ပါ။
ဒါပေမယ့် မျိုးဆက်က...ကုန်သွားပြိထင်ပါတယ်..တကယ်ဆို...ထိမ်းသိန်းောင့်ရှောက်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်...